Kunyoreswa mitanhatu mitsva yemhando yeApple Watch, iyo Series 4 iri padhuze | Ndinobva mac
Mitanhatu mitsva yeApple Watch yakanyoreswa, iyo Series 4 yaswedera
Zvinotaridza kuti pakupedzisira Apple ichapa mhando dzinoverengeka nyowani dzeApple Watch panguva inotevera yechiitiko munaGunyana uye kune izvi isu tinotarisa zvakare pa zvinyorwa zvitsva zvakaburitswa neEEC yakawanikwa neFrance webhusaiti Consomac.
Izvo zvinozivikanwa kuti pane matanhatu matsva eApple Watch mamodheru nedudziro yeumwe neumwe wavo, mune ino kesi iri iyo A1977, A1978, A1975, A1976, A2007 uye A2008. Mune ino kesi isu tine maviri mashoma mamodheru pane ayo akaunzwa mune yegore rapfuura kiyi, asi shanduko dziri kuuya kune aya Apple akangwara mawachi.
Musiyano muhuwandu hwewachi dzakaratidzwa dzinogona kuve dzakanangana nehukama hweLTE kana iyo inodhura ceramic modhi iyo Apple iri kutengeswa. Aya mamodheru anogona kunge akaganhurirwa neimwe nzira, asi hazvizove chero chinhu chinokanganisa ruzhinji rwevashandisi. Pamwe iyo aluminium modhi isina LTE kana iyo ceramic imwe mune imwe chete 42mm chiyero, isu tichaona.
CEE chiratidzo chakajeka icho chichaunzwa
Zvese zvekare mareferenzi ayo akabva kuEEC akasimbiswa zviri pamutemo mazuva echinyorwa, saka isu tine chokwadi chekuti kuratidzwa kweiyi nyowani Apple Watch kwave pedyo nekona. Ngatitarisirei kuti zvibvumirano nevashandisi zvinokurumidzirwa munyika dzatisati tava nemhando dzeLTE dziripo (sedzedu) uye tinogona kunakidzwa kamwechete uye kweizvi zvese hukuru hukuru uye kuzvimiririra kukuru kubva ku iPhone iyo iyo Apple smart wachi 4G kubatana.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Apple zvigadzirwa » Apple Watch » Mitanhatu mitsva yeApple Watch yakanyoreswa, iyo Series 4 yaswedera
Parallels Desktop yakagadziridzwa uye ikozvino inotibvumidza kuisa macOS Mojave